အကယ်၍သာ . . . . . - SPORTS MYANMAR
အကယ်၍သာ . . . . .
ဧပြီလ ဟာ ပြက္ခဒိန် အတွက် တော့ စတုတ္ထ မြောက်လ ဖြစ်ပါတယ် ။ မြန်မာ ပြည်သူ ပြည်သားတွေ အတွက် တော့ ရေသဘင် ဆင်နွှဲတဲ့ လ ၊ ပိတောက်တွေ ပွင့်ကြတဲ့ လ ၊ ကျောင်းတွေ ပိတ်တဲ့ လ ၊ အဝေးမှာ လုပ်ကိုင် စွန့်စား နေကြသူတွေ မွေးရပ် ကို ပြန်ကြတဲ့ လ ၊ ပူပြင်း ခြောက်သွေ့ တဲ့ လ တစ်ခု အဖြစ် သိကြ မှာပါ ။ ဘောလုံး ဝါသနာ ရှင်တွေ အတွက် ကတော့ ဧပြီလ ဟာ အကျိတ် အနယ် ပွဲကြီး ပွဲကောင်းတွေ ၊ အဆုံး အဖြတ် အလှည့် အပြောင်း အခိုက် အတန့်တွေ ကို မြင်တွေ့ရတဲ့ လ လို့ ဆိုနိုင် မှာ သေချာ ပါတယ် ။
ဥရောပ က ဘောလုံး လိဂ်တွေ ဟာ မေလ အလယ် လောက်မှာ အဆုံးသတ် လေ့ ရှိတာကြောင့် ဧပြီ လ ဟာ အသင်းတိုင်း အတွက် အထူး အရေးပါတဲ့ လ အဖြစ် ရာသီတိုင်း မှာ ရှိနေခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီနှစ် ဘောလုံး ပြက္ခဒိန် မှာလည်း ဧပြီလ ဟာ ပရိသတ်တွေ ကို မနားတမ်း ဖျော်ဖြေပေး ဖို့ အသင့်ပြင်ဆင် ထားခဲ့ ပါတယ် ။
အကယ်၍သာ ပြိုင်ပွဲတွေ ရပ်နား ဖို့ အကြောင်းဖန်မလာ ခဲ့ဘူး ဆိုရင် လာမယ့် စနေနေ့ မှာပဲ ဒေါ့မွန် နဲ့ ဘိုင်ယန် မြုးနစ် တို့ ရဲ့ ပွဲကြီးပွဲ ကောင်းနဲ့ ဧပြီ ကို ဖွင့်လှစ် မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီနှစ် ဘွန်ဒစ်လီဂါ ဟာ အကျိတ် အနယ် ရှိနေခဲ့တာ ကြောင့် ဒီ ၂ သင်းရဲ့ ဆုံတွေ့မှုဟာ သူတို့ အတွက်သာမက အမှတ်ပေး ချန်ပီယံဆု ကို ချိန်ရွယ် နေတဲ့ ရက်ဘူး တို့လို အသင်းတွေ အတွက် ပါ အရေးပါတဲ့ ပွဲ ဖြစ်လာမှာ သေချာ ပါတယ် ။
တနင်္ဂနွေ နေ့မှာ လည်း မန်ချက်စတာ စီးတီး နဲ့ လီဗာပူး ၊ လာဇီယို နဲ့ အေစီ မီလန် ၊ ဆီဗီးလား နဲ့ ဘာစီလိုနာ ၊ ဆိုဆီဒက် နဲ့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် တို့ ရဲ့ အားပြိုင်မှုတွေ ဟာ ပရိသတ်တွေ ကို နေဝင်မိုးချုပ် တဲ့ အချိန်က စပြီး နောက်တစ်နေ့ နံနက် မိုးသောက်တဲ့ အထိ မရပ်မနား ခံစားရစေ မှာဖြစ် ပါတယ် ။
ဒါတင် မကသေး ပါဘူး ။ လာမယ့် အင်္ဂါ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး နဲ့ ကြာသပတေး နေ့တွေ မှာ ချန်ပီယံလိဂ် နဲ့ ယူရိုပါလိဂ် ကွာတား ဖိုင်နယ် ပထမ အကျော့ ပွဲစဉ်တွေ ကို ကစား ကြမှာပါ ။ ဘာစီလိုနာ ၊ မန်စီးတီး နဲ့ ယူဗင်တပ် တို့ ဒီ အဆင့် ကို ရောက်လာခဲ့ရင် ဘယ်အသင်းတွေ နဲ့ ဆုံကြမှာလဲ ၊ ယူရိုပါလိဂ် မှာရော ဘယ် အသင်း ၈ သင်း က ဆုဖလားကြီး ကိုင်မြှောက်မယ့် လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ကျန်နေရစ်မှာလဲ ။ တကယ်လို့သာ ကစားဖြစ်ခဲ့ ကြရင်ပေါ့လေ . . .
ဧပြီလ ရဲ့ အလယ်ကို ရောက်လေလေ ပွဲတွေက ကောင်းလေလေပါပဲ ။ အေစီ မီလန် နဲ့ ယူဗင်တပ် တို့ရဲ့ ကိုပါ အီတလီယာ ဖလား ဆီမီး ဖိုင်နယ် ရှိသလို ဥရောပ ပွဲတွေ ကလည်း အတာသင်္ကြန် ကာလ မှာ အပြတ်ကဲထား တဲ့ သူတွေ ရဲ့ အနားယူချိန်တွေ ကို ဖျော်ဖြေမှု အပြည့် ပေးစွမ်း ကြဦးမှာပါ ။
ဧပြီလ ၂၆ ရက် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ကတော့ စပါး နဲ့ အာဆင်နယ် တို့ရဲ့ လန်ဒန် ဒါဘီ ၊ ယူဗင်တပ် နဲ့ လာဇီယို တို့ ရဲ့ စီးရီးအေ ချန်ပီယံဆု အဆုံးအဖြတ် ပွဲ နဲ့ ဘာစီလိုနာ နဲ့ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ်တို့ရဲ့ အမှားမခံ တဲ့ ပွဲစဉ်တွေ ပါဝင် လို့ နေခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ ချန်ပီယံလိဂ် နဲ့ ယူရိုပါလိဂ် ဆီမီး ဖိုင်နယ် ပထမ အကျော့ ပွဲစဉ်တွေ နဲ့ ဧပြီ ကို နှုတ်ဆက် ကြမှာပါ
အကယ်၍သာ ဒီကိစ္စ ကြီး မဖြစ်ခဲ့ဘူး ဆိုရင် ပေါ့ . . . . .